လက္ကားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပေးသွင်း - 1D;ONE
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ လက္ကားအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများပေးသွင်း.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် 1D;ONE.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် 1D;ONE.
Professional က High Quality Spark Plug လက်ကား - ။ 1D မော်တော်ကားပစ္စည်း, LTD ။ ထုတ်လုပ်သူ
1D; ။ ONE Professional က High Quality Spark Plug လက်ကား - 1D မော်တော်ကားပစ္စည်း, LTD ။ ထုတ်လုပ်သူ, Cargo Logistic အဆင်ပြေစေရန်& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာအစာရှောင်ခြင်းစက်နှိုး, 120000 ကီလိုမီတာအထိရှည်သောအသက်1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ လက်ကား High Quality Sparks plug - 1D မော်တော်ကားပစ္စည်း, LTD ။ ။
စစ်မှန်သော OEM အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ Piston 1D
1D အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုချင်းစီပစ္စတင် undergone အပူကုသမှုရှိပါတယ်။ အပူကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲအင်ဂျင်အတွက်ပစ္စတင်ရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။1D တစ်ခုချင်းစီကိုပစ္စတင်ထုတ်ကုန်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်ထိုင်ဝမ် CNC စက်ကိရိယာတခုကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်းထုတ်ကုန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအသေးစိတ်အရွယ်အစားသေချာစေရန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်ကုန် ultrasonic သန့်ရှင်းရေးကိုခံယူပါ, အဲဒီနောက်သက်ဆိုင်ရာမျက်နှာပြင်ကုသမှုပြုလိမ့်မည်။ပစ္စုပ္ပန်မှာကျနော်တို့ပေးနိုငျမျက်နှာပြင်ကုသနေသောခေါင်းစဉ်: ပစ္စတင်သံဖြူများတွင်လည်းကောင်းပစ္စတင်ဖော့စဖိတ်ပစ္စတင်စကတ်ပုံနှိပ် (အင်္ကျီပုံနှိပ် phosphating ဖြူများတွင်လည်းကောင်း) ။ ဤသုံးပါးမျက်နှာပြင်ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအင်ဂျင်အအေးစတင်စဉ်အတွင်းပစ္စတင်နှင့်ဆလင်ဒါကှနျ့အကြားပွတ်တိုက်အားတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆွဲဆလင်ဒါ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ) ပစ္စတင်ဦးခေါင်း Anode ကုသမှု (anode ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ဒါပစ္စတင်များဝန်ဆောင်မှုအချိန်တိုးမြှင့်ဖို့အဖြစ်, ကာဗွန်ပစ္စတင်ကိုယ်တည်းထဲသို့ထိုးဖောက်မနိုင်နိုင်အောင်အကြောင်း, ပစ္စတင်ဦးခေါငျး၏ခိုင်မာသောတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်)
မြင့်မားသောဝင်ပေါက်နှင့်လောင်ကျွမ်းစွမ်းဆောင်ရည်, ကောင်းသောလက်ရာကောင်း, လှပသော outsourcingကားအဆို့ရှင်၏အခန်းကဏ္ as သည်အင်ဂျင်ထဲသို့လေထဲသို့0င်ရောက်ပြီးမီးလောင်ပြီးနောက်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကိုထည့်ခြင်းအတွက်အထူးတာဝန်ရှိသည်။ အင်ဂျင်ပုံစံမှ၎င်းကိုစားသုံးမှုအဆို့ရှင်နှင့်အိပ်ဇောအဆို့ရှင်သို့ခွဲခြားထားသည်။ စားသုံးမှုအဆို့ရှင်၏ function သည်အင်ဂျင်ထဲသို့လေထဲသို့0င်ရန်နှင့်လောင်စာများနှင့်ရောနှောခြင်းနှင့်လောင်စာများနှင့်ရောနှောရန်ဖြစ်သည်။ မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအပူရှိန်သောမီးလောင်ရာဓာတ်ငွေ့များကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ကားအဆို့ရှင်ပျက်စီးမှုလက္ခဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -1. ၎င်းသည်အင်ဂျင်၏အလုပ်လုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးကား၏စွမ်းအားကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။2 ။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်အင်ဂျင်ကိုစတင်ခြင်း, လောင်ကျွမ်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ကားသည်လေထုယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်ကာဗွန်သိုက်များတိုးပွားလာသောဖြစ်ရပ်ဆန်းပေါ်လာလိမ့်မည်။3. ကျိုးပဲ့နေသောအဆို့ရှင်သည်ဆလင်ဒါ၏မတည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆလင်ဒါ၏မတည်ငြိမ်မှုသည်အင်ဂျင်ကိုလှုပ်ခါစေလိမ့်မည်။ အင်ဂျင်သည်အားနည်းနေပြီးအိပ်ဇောပိုက်ကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်မီးခိုးငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်။
Plug 1D Auto Parts CO ။ , LTD ကို spark to intro ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တရုတ်မှထုတ်လုပ်သူများ
1D; တစ် ဦး စိတ်ကြိုက် intects 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ တရုတ်မှထုတ်လုပ်သူများ, စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,မီးပွိုင့်ပလပ်သည်မီးပွိုင့်ကွိုင်မှစက်နှိုးဆန်းဒြပ်စင်များအကြားမီးပွားအမွှေးအကြိုင်ကိုတီထွင်ရန်,1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ Plug 1D Auto Parts CO ။
OEM စံအရည်အသွေးမြင့်ကားတစ်စီးအစိတ်အပိုင်းများအင်ဂျင်ပစ္စတင် 1D
အင်ဂျင် 1600 ကျော်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 32 ခု, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS Piston, PCS PISS ပစ္စတင်လက်စွပ်များ,တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ Bosch / Siemens စက်များ, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002 အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပညာရှင်များ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 အတည်ပြုခဲ့သည်။1D အမှတ်တံဆိပ်မီးပွား plug, Japan Ngk, Denso, Spark Plug နည်းပညာနှင့် NTK ကြွေထည်နည်းပညာပေါင်းစပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားလက်မှတ်ရေးထိုးထားချက်လက်မှတ် ထုတ်ကုန်များသည် Platinum Spark Plug, Iridium Platinum Spark Plug, Iridium Spark Plug, နီကယ် Allow Plug နှင့်အခြားမော်ဒယ်များ။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းစားသုံးမှုအဆို့ရှင်နှင့် exhasut valve 1d ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
1. Nickel-Base Superalley2. မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ3. ခိုင်မာတဲ့ဝတ်ဆင်4. Corrosion ကာကွယ်တားဆီးရေး5. သံ - Keolian အမျိုးအစားသံမဏိအပူခံနိုင်ရည်သည် 200MPA သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ဤနည်းပညာအသစ်ထုတ်ကုန်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်လူအနည်းငယ်သာလိုအပ်နေသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများကိုအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။
စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ Bearing အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေး
1D; စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ, စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးရှိသောအဓိကအရည်အသွေးတစ်ခု& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်1D အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအဓိက bearing s စက်ရုံ, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
1d; အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ, စက်ရုံ, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်1D; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံတီ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 အတည်ပြုခဲ့သည်။1D အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စတင်စက်ရုံ, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်